ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျနဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ တကယျလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျဒီ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျနဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ တကယျလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျဒီ
အရိုးနဲ့သှားတှေ ခိုငျမာဖို့ ဗီတာမငျဒီက မရှိမဖွဈ သကျစောငျ့ဓာတျတဈမြိုးပါတဲ့။ ဒီသကျစောငျ့ဓာတျလေးက ကိုယျခံအားစနဈ ဟျောမုနျးထုတျလုပျမှုနဲ့ ကွှကျသားအငျအားတှမှော တဈတပျတဈအား ပါဝငျနပွေီး အရေးပါတဲ့တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျပေးနပေါတယျ။
>> ကိုယျဝနျဆောငျနဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှေ ဗီတာမငျဒီ လိုအပျသလား?
သာမနျလူတှမှောတောငျ မရှိမဖွဈဓာတျဖွဈနမှေတော့ ကိုယျဝနျဆောငျတှမှော မခြို့တဲ့ရေး တတျနိုငျသလောကျ ကာကှယျဂရုစိုကျပေးကွရအောငျ။ အထဲက ကလေးလေး ဖှံဖွိုးကွီးထှားဖို့ မရှိမဖွဈ လိုအပျနတေဲ့ဓာတျပါတဲ့။ မိခငျလောငျးလေးမှာ ဗီတာမငျဒီဓာတျ ခြို့တဲ့နရေငျလညျး -
● ကိုယျဝနျဆောငျ သှေးတိုးနှငျ့ အတကျရောဂါ
● အခြိနျမတိုငျခငျ စောမှေးဖှားတာ
● ဘကျတီးရီးယားပိုး ဝငျလှယျတာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။
သုတသေနတဈခုအရ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ဗီတာမငျဒီသရီး (Vitamin D3) ပွညျ့ဝနခွေငျးအားဖွငျ့ မှေးဖှားလာမယျ့ ကလေးလေးရဲ့ အရိုးနဲ့သှားတှေ ခိုငျမာသနျစှမျးစတေဲ့အပွငျ စိတျကရြောဂါတှကေို အထိုကျအလြောကျ ကာကှယျပွီး ဖွဈစပေါတယျတဲ့။
>> အရေးပါအရာရောကျတဲ့ ဗီတာမငျဒီကို ဘယျကရမလဲ?
1. နရေောငျခံခွငျးဖွငျ့ အရပွေားမှာ ဗီတာမငျဒီ ဖှဲ့စညျးမှု ဖွဈတညျလာပွီး လိုအပျသလောကျ ရရှိစပေါတယျ။
2. ဒီတော့ နစေ့ဉျမိနဈ ၂၀ ခနျ့ မနကျခငျးနရေောငျခံပေးဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျ။
>> အစားအသောကျက ရရှိမယျ့ ဗီတာမငျဒီ
● အရိုးပါစားနိုငျတဲ့ ငါးကလေးမြား
ဗီတာမငျခြို့တဲ့နဖေို့ အလားအလာရှိသူတှကေတော့ အဝလှနျသူ မိခငျလောငျးတှေ၊ နို့တိုကျမိခငျတှနေဲ့ နစေ့ဉျအစားအသောကျထဲမှာ ဗီတာမငျဒီ ပွညျ့ပွညျ့၀၀ မပါဝငျသူတှပေါတဲ့။ တကယျတော့ ကိုယျဝနျဆောငျတှဟော တဈနကေို့ ဗီတာမငျဒီ ၄၀၀ ယူနဈခနျ့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေး အတျောမြားမြားမှာ သူ့အခြိုးအစားနဲ့သူ ပါဝငျပွီးသားဖွဈပမေယျ့ မသောကျခငျ မိမိသောကျမယျ့ ဆေးဝါးမှာ လုံလုံလောကျလောကျ ပါ/မပါ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသမေးမွနျးပွီးမှ သောကျဖို့ မမေတေို့ကို အကွံပေးပါရစနေျော။
ကိုယျဝနျဆောငျတှသောမက နို့တိုကျမိခငျတှဟောလညျး ဗီတာမငျဒီ လိုအပျလကျြပါပဲ။ ခွောကျလအောကျ ကလေးငယျတှဟော သူတို့ရဲ့ အရိုးသနျမာမှုအတှကျ မိခငျနို့ကပါလာမယျ့ ဗီတာမငျဒီကိုသာ အားကိုးရတာမို့ နို့တိုကျမိခငျတှအေနနေဲ့ မိမိကိုယျကိုသကျစောငျ့ ဗီတာမငျဒီဓာတျ အထူးပွညျ့ဝနဖေို့ သတိမူသငျ့ပါတယျနျော။
တဈဆကျတညျးမှာပဲ ဗီတာမငျဒီဓာတျ ဖွညျ့စှကျစားတဲ့အခါ နညျးသှားတာတှေ၊ မြားသှားတာတှေ ဖွဈနိုငျသေးတာမို့ ပမာဏမြားသှားတဲ့အခါ ပွနျစှနျ့ထုတျရ ခကျခဲနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဗီတာမငျဒီပါတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေး သောကျနတောတောငျမှ မိမိကိုယျကို ဗီတာမငျဒီ မပွညျ့ဝဘူး ထငျမှတျနခေဲ့ရငျ သှေးတှငျးဗီတာမငျဒီပမာဏ စဈဆေးမှု အရငျခံယူပွီးမှ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြအတိုငျး ဖွညျ့စှကျသောကျသုံးဖို့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြားနဲ့ နို့တိုကျမိခငျမြားကို တငျပွ ဗဟုသုတမြှဝလေိုကျရပါတယျ။
အရိုးနဲ့သွားတွေ ခိုင်မာဖို့ ဗီတာမင်ဒီက မရှိမဖြစ် သက်စောင့်ဓာတ်တစ်မျိုးပါတဲ့။ ဒီသက်စောင့်ဓာတ်လေးက ကိုယ်ခံအားစနစ် ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ကြွက်သားအင်အားတွေမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်နေပြီး အရေးပါတဲ့တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်။
>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ ဗီတာမင်ဒီ လိုအပ်သလား?
သာမန်လူတွေမှာတောင် မရှိမဖြစ်ဓာတ်ဖြစ်နေမှတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ မချို့တဲ့ရေး တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ဂရုစိုက်ပေးကြရအောင်။ အထဲက ကလေးလေး ဖွံဖြိုးကြီးထွားဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်ပါတဲ့။ မိခင်လောင်းလေးမှာ ဗီတာမင်ဒီဓာတ် ချို့တဲ့နေရင်လည်း -
● ကိုယ်ဝန်ဆောင် သွေးတိုးနှင့် အတက်ရောဂါ
● အချိန်မတိုင်ခင် စောမွေးဖွားတာ
● ဘက်တီးရီးယားပိုး ဝင်လွယ်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
သုတေသနတစ်ခုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဗီတာမင်ဒီသရီး (Vitamin D3) ပြည့်ဝနေခြင်းအားဖြင့် မွေးဖွားလာမယ့် ကလေးလေးရဲ့ အရိုးနဲ့သွားတွေ ခိုင်မာသန်စွမ်းစေတဲ့အပြင် စိတ်ကျရောဂါတွေကို အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။
>> အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ဗီတာမင်ဒီကို ဘယ်ကရမလဲ?
1. နေရောင်ခံခြင်းဖြင့် အရေပြားမှာ ဗီတာမင်ဒီ ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်တည်လာပြီး လိုအပ်သလောက် ရရှိစေပါတယ်။
2. ဒီတော့ နေ့စဉ်မိနစ် ၂၀ ခန့် မနက်ခင်းနေရောင်ခံပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
>> အစားအသောက်က ရရှိမယ့် ဗီတာမင်ဒီ
● အရိုးပါစားနိုင်တဲ့ ငါးကလေးများ
ဗီတာမင်ချို့တဲ့နေဖို့ အလားအလာရှိသူတွေကတော့ အဝလွန်သူ မိခင်လောင်းတွေ၊ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ နေ့စဉ်အစားအသောက်ထဲမှာ ဗီတာမင်ဒီ ပြည့်ပြည့်၀၀ မပါဝင်သူတွေပါတဲ့။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဟာ တစ်နေ့ကို ဗီတာမင်ဒီ ၄၀၀ ယူနစ်ခန့် လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး အတော်များများမှာ သူ့အချိုးအစားနဲ့သူ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် မသောက်ခင် မိမိသောက်မယ့် ဆေးဝါးမှာ လုံလုံလောက်လောက် ပါ/မပါ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသမေးမြန်းပြီးမှ သောက်ဖို့ မေမေတို့ကို အကြံပေးပါရစေနော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေသာမက နို့တိုက်မိခင်တွေဟာလည်း ဗီတာမင်ဒီ လိုအပ်လျက်ပါပဲ။ ခြောက်လအောက် ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရိုးသန်မာမှုအတွက် မိခင်နို့ကပါလာမယ့် ဗီတာမင်ဒီကိုသာ အားကိုးရတာမို့ နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုသက်စောင့် ဗီတာမင်ဒီဓာတ် အထူးပြည့်ဝနေဖို့ သတိမူသင့်ပါတယ်နော်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဗီတာမင်ဒီဓာတ် ဖြည့်စွက်စားတဲ့အခါ နည်းသွားတာတွေ၊ များသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်သေးတာမို့ ပမာဏများသွားတဲ့အခါ ပြန်စွန့်ထုတ်ရ ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင်ဒီပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး သောက်နေတာတောင်မှ မိမိကိုယ်ကို ဗီတာမင်ဒီ မပြည့်ဝဘူး ထင်မှတ်နေခဲ့ရင် သွေးတွင်းဗီတာမင်ဒီပမာဏ စစ်ဆေးမှု အရင်ခံယူပြီးမှ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဖြည့်စွက်သောက်သုံးဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနဲ့ နို့တိုက်မိခင်များကို တင်ပြ ဗဟုသုတမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။